Akụkọ - Uru dị na iji igbe ọkpọ
Uru dị na iji igbe igbe
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, igbe igbe tin na-emepe ngwa ngwa n’ahịa nkwakọ ngwaahịa, òkè ya na-arịwanye elu. Ọ na-e ọtụtụ-eji nri nkwakọ, ịchọ mma nkwakọ, na-emepụta ọgwụ nkwakọ, chemical nkwakọ na ndị ọzọ na ubi. N'etiti ha, igbe tin igbe dị maka nnukwu ọnụọgụ, nke igbe igbe tii na igbe achicha ọnwa. Ihe kpatara mmepe ngwa ngwa nke igbe ọkpọ tin bụ nke a na-ekewapụ site na njirimara ya pụrụ iche. Taa, ụlọ ọrụ na-emepụta igbe igbe nke ụlọ ọrụ na-eleba anya na uru dị ike nke ngwugwu igbe igbe na mmadụ niile.
Nke mbu, n’ile anya, nkwusi igbe tin n’onwe ya nwere luster ya nke dara, ihe nbiputa putara ihe karie ihe ndi ozo. Mgbe e bipụtara igbe tin ahụ, agba ndị ahụ na-enwu gbaa ma mara mma, na usoro ndị a na-adị ndụ, nke na-eme ọ bụghị naanị ịbawanye mma nke ngwongwo, kamakwa na-egosi na ngwongwo ndị a dị elu ma nwee ihu. Yabụ, ọtụtụ ndị na-eri ngwaahịa kacha ahọrọ onyinye dị na igbe tin mgbe ha na-ahọrọ onyinye.
Nke abuo, a na-eji ihe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mee ihe, nke nwere ikuku ikuku, shading, ịdị ọhụrụ na nrụgide nrụgide karịa ihe ngwugwu ọ bụla, ma nwee ike ichedo ngwaahịa ahụ na oke. Ma n'ihi ike na plastik nke tinplate, enwere ike ime ka ihe di iche iche di na igbe di iche iche, dika igbe gbamgbam gburugburu, igbe nkpu square, igbe nkpuru obi, trapezoid tin, na kwa igbe puru iche puru iche. Mfe eme site na ebu.
Ke adianade do, tin igbe nkwanye bụ environmentally friendly. Dabere na nyocha nke ahia onyinye mgbe ezumike na afọ ndị na-adịbeghị anya, mgbe ememme Spring na Mid-mgbụsị akwụkwọ Festival, na imegharị ihe maka iji nke ọtụtụ ndị na-abụghị gburugburu ebe obibi nkwupụta bụ nnọọ obere, ebe nke imegharị ihe maka iji nke igbe igbe dị ka ọnwa achicha tin igbe na igbe candy swiiti na-abawanye kwa afọ. Enwere ike imegharị igbe iron ma mata ya dịka nkwakọ ngwaahịa na-enweghị mmekpa ahụ gburugburu ebe obibi. A na-akwakọ ngwaahịa ndị ahụ na igbe ígwè, nke na - eme ka ọ ghara ịbawanye mma ngwaahịa, kamakwa na - echekwa akụrụngwa ma belata mmetọ gburugburu ebe obibi. Yabụ, n'ahịa nkwakọ ngwaahịa n'ọdịnihu nke nwere isiokwu nke nchedo gburugburu ebe obibi, ojiji nke tinplate nkwakọ ngwaahịa ga-abụ omume nke ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa.
Post oge: Mar-16-2018
CD Nchekwa Case, Igbe Tin, Nkata Nchekwa Metal na mkpuchi, Tin Box Nkwakọ, Mgbanaka Pull Nwere Ike Imeghe Claw, Ahaziri Tin Box,